OPPO Fumana X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
OPPO Fumana X: Iflegi entsha yomenzi waseTshayina
Emva kweeveki ukuvuza okuninzi, i-OPPO Fumana i-X ngoku isemthethweni. Iflegi entsha yomenzi waseTshayina ibonisiwe kwaye sele sazi konke ngayo. Yimodeli apho uphawu lunethemba lokungena kwintengiso yaseYurophu. Ke sinokulindela isiphelo esipheleleyo esipheleleyo, esime ngaphandle kwesikrini esihlala kwi-93,8% ngaphambili.
Uyilo olutsala umdla wale OPPO Fumana X. Alithandabuzeki elokuba ileta elungileyo yemfonomfono, enokuthi ithandwe kakhulu eYurophu kwaye iya kuthi ivelise inzala kubasebenzisi abakwimarike. Yintoni esinokuyilindela kwifowuni?
Uyilo lwefowuni lubonisa iglasi egobile ngaphambili nangasemva, kunye nemiphetho yamaphethelo anokukukhumbuza ngesiphelo esiphakamileyo seSamsung. Babheja kwiglasi enamacala amabini kwaye isakhelo senziwe ngealuminium. Inxalenye engaphambili, njengoko ubona kwimifanekiso kwabelwane ngeVerge, icocekile kwaye izivamvo zifihlwe kwinxalenye ephezulu yephaneli. Le OPPO Fumana i-X ineekhamera eziphuma emzimbeni kwaye zifihle xa zingasetyenziswanga. Uyilo olutsha.
1 Ukucaciswa kwe-OPPO Fumana i-X
Ukucaciswa kwe-OPPO Fumana i-X
Ayisiyilo kuphela ifowuni enkulu, kuba ngokwemigaqo yokubalulwa kwale OPPO Fumana X ayidanisi nayo. Sesona sixhobo sigqibeleleyo elenziwa luphawu ukuza kuthi ga ngoku. Ngaphandle kwamathandabuzo, indlela elungileyo yokungena kwimarike yaseYurophu ngokusemthethweni kweli hlobo. Le yinkcazo yefowuni:
Isikrini: 6,4 intshi ngesisombululo 2360 × 1080 pixels
Inkqubo: Qualcomm Snapdragon 845
i-ram: I-8 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-128/256 GB.
Cámara trasera: 20 + 16 MP ezimbini zekhamera
Ibhetri: I-3.730 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Inkqubo yokusebenza: I-Android 8.1 Oreo eneMibala ye-OS njengaleyo yokwenza ngokwezifiso
Ukuxhuma: I-Bluetooth 5.0, i-LTE 4G, i-USB yohlobo C
Abanye: Inzwa yeminwe edityanisiweyo kwiscreen, ukubonwa kobuso
Ngokubanzi, siyakubona oko ifowuni isiphelo esiphakamileyo ngokweenkcukacha. I-OPPO ikhethe eyona processor iphucukileyo kwintengiso yesixhobo, kunokuba njalo ngenye indlela. Ukongeza, ifowuni iza iphelele ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, ukubanakho ukukhetha phakathi kwendibaniso ezimbini kule meko. Uxhotyiswe ngokugqibeleleyo.
I-OPPO Fumana i-X ayidanisi ngokwebhetri nokuba yeyiphi., Ngebhetri elungileyo ekufuneka inike ukuzimela ngokwaneleyo. Ingakumbi ngokudibeneyo neprosesa enayo ifowuni. Njengoko unokulindela, iza nokutshaja ngokukhawuleza kubandakanya. Umsebenzi osele ube yinto eqhelekileyo kweli candelo lentengiso.
Inxalenye engemuva imele inkqubo apho kuboniswa khona iikhamera. Ukusukela ukuzisebenzisa, umsebenzisi kufuneka ahambise eli candelo lingasemva kwifowuni. Ngokwenza njalo, kuyakwenzeka ukudubula ngokuzenzekelayo. Ke nokuba kuya kufuneka wenze intshukumo yomzimba, ungathatha iifoto ngokulula kule-OPPO Fumana i-X.
Ukuqaliswa kwefowuni e-China kuya kwenzeka sele kule veki, nangona sele kukho amajelo eendaba athi ayafumaneka ukusukela namhlanje elizweni. Kodwa kubonakala ngathi abazukulinda ixesha elide ukuze babenakho ukufumana le OPPO Fumana X. Abasebenzisi kwihlabathi liphela kuyakufuneka balinde ithutyana.
Ukuqaliswa kwefowuni eYurophu naseMelika kuqinisekisiwe, kodwa ngalo mzuzu awukho umhla wawo. Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka silinde inkampani ukuba isixelele okuthile malunga nayo kwiintsuku ezizayo. Kodwa izicwangciso zabo kukufikelela kwiimarike ezinjengeSpain ngoJuni, ukuze isemthethweni xa kuphela inyanga.
Malunga nexabiso, ngalo mzuzu ixabiso eli OPPO Fumana X eliza kuba nalo eSpain alaziwa. Ngokuqinisekileyo xa ukwaziswa kwayo kubhengeziwe kwilizwe lethu siya kuzazi ezi nkcukacha. Ke sinethemba lokwazi ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OPPO Fumana X: Iflegi entsha yomenzi waseTshayina
IHuawei P9 ayizukuhlaziya kwi-Android Oreo
Iimephu zikaGoogle zisusa ukudityaniswa kwe-Uber ngaphandle kokunika nayiphi na inkcazo